တစ်ဒေါ်လာသုံးရန် Dime တစ်ခုသိမ်းဆည်းခြင်း Martech Zone
ပြီးခဲ့သည့်ညက Oprah ၏ Big Give ပြပွဲ၏အစကို (ကျွန်ုပ်မူကားလွဲချော်သွားသည်) ကြည့်ခဲ့သည်။ ငါရူပဗေဒကိုနှစ်သက်သည် - တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ပေး၍ အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်သူသည်အနိုင်ရသည်။
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အချက်မှာဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ သည်အရေးမကြီးပါ။ ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းစသည်ဖြင့်စိတ်ပူစရာမလိုဘဲတကယ်ပဲငွေအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်ငွေသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျော်ကြားသူတစ် ဦး အားဖုန်းခေါ်ခြင်း၏အခြားအဆုံးတွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သို့သုံးစွဲမည်ကိုသင်အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်ပါကသင်၏အမြတ်ဆုံးများကိုညှစ်ယူနိုင်ရန်သင်ရှုံးသည်။ အစား, သင် $ 2,500 လျစ်လျူရှုနှင့်ကြီးမားသောပိုက်ဆံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျှင် - သင်လမ်းပေါ်မှာ!
ငါ့အတွက်အပြိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကငါတို့လုပ်နေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲ။ သင်၌ဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များရှိပါက၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းဝယ်ယူရန်သင်မည်မျှသိမ်းဆည်းမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းသည်စကားမပြောနိုင်သောအရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - သင့်တွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၀ င်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ / နာရီရှိသည်။ သူသည်အလုပ်ကိုဒေါ်လာ ၇၀ / ဒေါ်လာဖြင့် ၂၅ ဒေါ်လာသက်သာစေရန်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနေသည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်တစ်နာရီကြာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်ခြင်းကိုပရင်တာအသစ်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သုံးစွဲခဲ့လျှင်သင်ဒေါ်လာ ၁၅ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုအစား၊ သင်သည် ၀ န်ထမ်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၇၀ ဖြင့်ပထမဆုံးရောင်းချပြီးသောပထမဆုံးပရင်တာကိုဝယ်သင့်သည်။ သင် $ 30 ထက်ပိုပြီးလုပ်လိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်များပို? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရင်တာပေါ်မှဒေါ်လာအနည်းငယ်သက်သာစေရန်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနေတာကနို့စို့တာနှင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းကိုငှားရမ်းခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့စီမံကိန်းကိုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့လုပ်ရင်ကောင်းမယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအချိန်မီခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ယာဉ်အတွက်ပွတ်လိမ့်မယ်။
ငါလက်ထပ်တုန်းကကျွန်မဇနီးနဲ့ Las Vegas နဲ့ Laughlin ကိုသွားခဲ့တယ်။ ငါလောင်းကစားသမားမဟုတ်ပေမယ့်သူ့မိဘတွေက သူမရဲ့အမေကငါ့ကိုအကြံပေးတာကအမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးလောင်းကစားတာပဲ။ တစ်ညမှာဗီဒီယို Blackjack နဲ့ Video Poker ကစားနေတုန်းတစ်ချိန်တည်းမှာဒေါ်လာ ၁.၂၅ လောက်ကျခဲ့တယ်။ အဲဒါကသိပ်ပြီးမလွယ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီအချိန်တုန်းကရေတပ်မှာနေခဲ့တုန်းကပိုက်ဆံသိပ်မရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားဘတ်ဂျက်သည်တစ်ရက်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်သည်။
ခဏအကြာမှာငါ့ပုံးရဲ့အောက်ခြေကိုတွေ့တော့ငါလေးကြိမ်လေးကြိမ်ထည့်တော့တယ်။ ပြီးတော့ ၃ ... ပြီးတော့4... ပြီးတော့3... ပြီးတော့ Royal Flush ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်တော့်ယောက္ခမကကျွန်တော့်အတွက် ၀ မ်းသာအားရပြုခဲ့ပါတယ်။ သူမအတွက်ဒေါ်လာ ၆၂.၅၀ ပေးချေမှုကိုသူမမြင်တွေ့မှီအထိပါပဲ။ သူမ၏မေးရိုးကျဆင်းသွားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဒေါ်လာ ၁.၂၅ ဖြင့်သာဆက်လုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ခန့်ပိုမိုချမ်းသာပါလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, ငါပဲရပ်ကွက်နောက်ထပ်ပုံးရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအလုပ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မျက်စိဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလောင်းကစားရန်သူတို့၏စုဆောင်းငွေစာရင်းများ၊ ယင်းအစားသူတို့သည်ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးသူတို့၏အာရုံကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ငွေအားလုံးကိုစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းအတွက်မျှော်လင့်၊
သူတို့သည်ငွေများကိုစီးပွားရေးဆယ်ခုတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးစီးပွားရေးတစ်ခုစီကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီခြင်းဖြင့်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့က၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကဲ့သို့တုံ့ပြန်ချက်ကိုရိုးရိုးလေးပေးကြသည်။ အချို့ကဘဏ္financialာရေးထောက်ပံ့ပေးပြီးအချို့ကနည်းပညာဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက်များပေးသည်။ သူတို့ကသူတို့၏အားသာချက်များကိုစီးပွားရေးတစ်ခုစီတွင်မည်သို့အသုံးချနိုင်ကြောင်းကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းတို့နှင့်အညီခွဲဝေပေးသည်။ ဒီနေရာမှာ $ 25k နဲ့အဲဒီမှာ $ 25k ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်ငါတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ is ဘာမှမ
တစ်နည်းပြောရရင်သူတို့ဟာဈေးအသက်သာဆုံးပရင်တာကို ၀ ယ်တာမဟုတ်ဘူး၊
အဲဒါဘာလဲ ဘယ်မှာလဲ? ဘယ်လိုလဲ? Web Marketing ကိုမဟာဗျူဟာများ
မတ်လ 3, 2008 မှာ 11: 22 pm တွင်
Black Jack တွင်တော်ဝင်ပန်းချီကားတစ်ချပ်သာဖြစ်သည်။
Doug စကားမစပ် RSS feed မှဤပို့စ်တင်ရန် Permalink ကို နှိပ်၍“ ငါတို့ရှာလို့မရဘူး! သငျသညျဆုံးရှုံးခဲ့ရသို့မဟုတ်ငါတို့ဖြစ်! သတင်းစကား ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမသေချာပေမဲ့ခင်ဗျားသိချင်တယ်ထင်တယ်
မတ်လ 3, 2008 မှာ 11: 35 pm တွင်
အိုး! 'နှင့် video Poker' ကိုမေ့သွားသည်။ ထူးဆန်းတာကငါ Keno ကိုမနေ့ညကသွားပြီးခရီးအတွက်ပေးခဲ့ရတယ်။ ငါနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ထီပေါက်စလွဲချော်။ လေဆိပ်မှာနောက်ထပ်အစက်အပြောက်တစ်ခုလွတ်သွားတယ်။ ငါတခါတလေနည်းနည်းထူတယ်
Re: RSS - ပြသနာရှိတာပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်တဲ့အချိန်။ ငါထုတ်ဝေသည်မဟုတ်ထင်နှင့်ငါ post ကိုပက်ကျိပြုပြင်မွမ်းမံ။ ငါကတကယ့်အောင်သူပါ။ 😉
မတ်လ 4, 2008 မှာ 9: 30 AM
Doug - အချိန်ကောင်းကငွေဖြစ်တယ်၊ တစ်နာရီအကုန်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရှာဖွေတာဟာအလဟ is ဖြစ်တာငါသဘောတူတယ်။ သို့သော်မည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်မဆိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးဝယ်ယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုမထင်ပါ။ BestBuy.com, CircuitCity.com, Amazon.com နှင့် NewEgg.com တို့ကိုခေါ်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်သည်ငါးမိနစ်ကြာလျှင်မည်သည့်စျေးနှုန်းကအကောင်းဆုံးလဲ။